မသေခင်လှူချင်လို့ ခဏခဏမဖမ်းပါနဲ့ဆိုပြီး မျက်ရည်တွေနဲ့ပြောပြလာတဲ့ မဟာဗန္ဓုလမ်းမ​ပေါ် ၃၂ လမ်းထိပ်​က ပေါင်မုန့်သည် အဘွားအို ရဲ့ (ဗီဒီယို)
ဘယ်အချိန်လာဖမ်းမှာလဲဆိုပြီး စိုးရိမ်တစ်ကြီးနဲ့ မဟာဗန္ဓုလလမ်းမပေါ် ၃၂လမ်းထိပ်မှာ ပေါင်မုန့်ရောင်းနေတဲ့ ဒေါ်သန်းသန်းတစ်ယောက် ဝယ်သူကို မျှော်နေရှာပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကာလက သူရောင်းတဲ့နေရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုင်ကြားခံရလို့ သူ့ပေါင်မုန့်တွေ အသိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။သူ့အတွက် ကျောတစ်ခင်းစာအိပ်စက်ဖို့ ၊ဆေးကုသဖို့၊ ဝမ်းရေးအတွက် ဒီပေါင်မုန့်ကို သူဆက်ရောင်းမှ ရမှာပါ။ ဒါကြောင့် ငွေနှစ်သိန်းချေးယူပြီး ဒီနေရာလေးမှာပဲ ပြေးတစ်လှည့် ပုန်းတစ်လှည့် […]
အဖေနဲ့အမေ မရှိပေမဲ့ မောင်လေးရှိတယ် အားမငယ်နဲ့ နေပြန်ကောင်းလာမှာပါ” ဆိုတဲ့ ၇ နှစ်အရွယ် ကောင်လေး….
Zhao Wenhui လို့ အမည်ရတဲ့ အသက် ၁၁အရွယ် ကောင်မလေးမှာ Zhao Wenjing လို့ အမည်ရတဲ့ ၇နှစ်အရွယ် မောင်လေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ မောင်နှမ နှစ်ယောက် ဆော့ကစားရင်း မတော်တဆမှုတစ်ခုနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကတော့ မောင်နှမနှစ်ယောက် ဆော့ကစားရင်း မတော်တဆ ကုတင်ပေါ်ကနေ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို ခေါင်းနဲ့ […]
မိန်းကလေးများ ရာသီလာစဉ် ဒါတွေ လုံးဝ မလုပ်သင့်ပါဘူး..
မိန်းကလေးများ ရာသီလာစဉ် လုံးဝ သတိထားကြပါ။ ဒါတွေ လုံးဝ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ အမျိုးသမီးများ သတိထား ဆင်ခြင်နိုင်ရန်အတွက်သာ။ အမျိုးသမီးများ ရာသီကာလအတွင်း အောက်ပါအချက်များ မလုပ်သင့်ပါ။ ဒါတွေကတော့…. ၁။ ရာသီချိန် ကာလအတွင်း ရေခဲရေ ၊ဆိုဒါ မသောက် သုံးသင့်သလို အုန်းသီးလဲ မစားသင့်ပါ သုတေသီများ၏ […]
နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းမလို့လား . . . ဒါလေး သတိထား ..
စစ်တမ်းတွေအရ ပြောရရင် စုံတွဲတွေက ပထမဆုံးအကြိမ် နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းပြီးနောက်မှာ သူတို့ရဲ့ အဖော်ကို စိတ်ဝင်စားမှု လျော့သွားတတ်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ် အချစ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လူ့ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခု နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းတဲ့ အနမ်းဆိုတာ “ငါမင်းကို ချစ်တယ်” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မို့ ချစ်သူတွေကြားထဲမှာ အဓိကကျတဲ့ အနမ်း […]
အသက်ဘေးက လွတ်မြောက်စေတဲ့ သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်အစွမ်း (လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကျော်က ဖြစ်ရပ်မှန်)အချိန်မှာ မွန်းလွဲသုံးနာရီခန့် အချိန်ဖြစ်ပေသည်။ တိတိကျကျဆိုရလျှင် ၁၉၇၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၅ ရက်၊ မွန်းလွဲ သုံးနာရီခန့် အချိန်ဖြစ်ပေသည်။ စစ်တွေမြို့ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ် တရားရုံးတွင် ရုံးကိစ္စများ ဆောင် ရွက်ပြီးနောက် ကျွန်တော်သည် […]
မြောင်းမြအကျဉ်း​ထောင်​တွင်​ မူးယစ်​​ဆေးဝါးအမှုဖြင့်​​ထောင်​ဒဏ်​(၂၄)နှစ်​ကျခံ​နေသူအား ​ထောင်​ဝင်​လာ​တွေ့သူအမျိုးသမီးတစ်​ဦးက​ထောင်​ဝင်​စာပို့သည့်​ပစ္စည်းထဲသို့ မူးယစ်​​ဆေးများထည့်​သွင်းပို့​ဆောင်​သည်​ကို ဖမ်းဆီးရမိခြင်း Wednesday, June 12, 2019 ဧရာဝတီတိုင်း​ဒေသကြီး​မြောင်းမြမြို့. အကျဉ်း​ထောင်​တွင်​ ၁၁.၆.၂၀၁၉.ည​နေ.၅.နာရီခန့်​တွင်​ မူးယစ်​​ဆေးဝါးမှုဖြင့်​​ထောင်​ဒဏ်​(၂၄)နှစ်​ကျခံ​နေ​သော.မြတ်​လင်းစံအား .​ထောင်​ဝင်​စာ​တွေ့ရန်​လာ​ရောက်​သည့်​. မညွန့်​ညွန့်​စန်း(ခ)မသဇင်​ယူ​ဆောင်​လာ​သော​ ထောင်​ဝင်​စာပစ္စည်းများကို ရှာ​ဖွေ​ရေးတာဝန်​ကျ. လ/ထကြီးကြပ်​​ရေးမှူး.၁. ညီညီထက်​နှင့်​ အဖွဲ့မှ ရှာ​ဖွေစစ်​​ဆေးစဉ်​ .ကြက်​သွန်​နီဥများအားမသင်္ကာဖွယ်​​တွေ့ရှိ​ကြောင်း အ​ကြောင်းကြားသဖြင့်​. ​မြောင်းမြရဲစခန်းမှနယ်​ထိန်း​ခေါင်း​ဆောင်​ .ဒုရဲအုပ်​တင်​ကိုကိုလင်းနှင် […]
ကြိတ်ချစ်နေရသူက အိမ်ထောင်ပြုသွားလို့ ငေးကြည့်နေရုံလေးပဲ တတ်နိုင်တော့တယ် ဆိုတဲ့ ပိုပို ပရိသတ် ​အချစ်​​တွေကို ပိုင်​ဆိုင်​ ထားတဲ့ အ​ဆို​တော် ​အနုပညာရှင်​​တွေ ထဲက တစ်​​ယောက် ​အပါအဝင် ​တစ်​​ယောက်​ပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။ ချစ်​ဖူးခဲ့သမျှ ဆိုတဲ့ ​ခွေ​လေးက​နေ စတင်​ လူသိများ ခဲ့တဲ့ အဆို​တော်​တစ်​ဦးလည်း ဖြစ်​ပါတယ်​။ […]
ခင်ပွန်းသည်တွေ ဇနီးမယားဆီက လိုချင်တဲ့အရာ (၇) ခု…
အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြင် အမျိုးသားတွေလိုချင်တဲ့ အခြားအရာတွေ အမြောက်အများရှိပါတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ ပုဆိုးတန်းတင် အကြင်လင်မယားဖြစ်ရုံသက်သက်မဟုတ်ပါဘူး။ လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး နှစ်ပေါင်းများစွာ အတူနေဖို့ဟာ ခံစားချက်အမြောက်အများပါဝင်နေတဲ့ ကိစ္စပါ။ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြင် အမျိုးသားတွေလိုချင်တဲ့ အခြားအရာတွေ အမြောက်အများရှိပါတယ်။ ၁ . နားလည်မှု သူတို့အလေးထားလွန်းတာတွေကို ကိုယ့်ဘက်က ပေါ့ပျက်ပျက်လုပ်မိတယ်ဆိုရင် […]
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများ အတွက် ဘ၀တစ်ဆစ်ချိုးပြောင်းလဲမြင့်တက်လတ္တံ့။ အတိတ်ကံကိုအကြောင်းပြုပြီးငွေအစုလိုက်အပုံလိုက်ရခြင်း၊ထီဆုကြီးပေါက်ခြင်း၊ခြံ၊ကား၊ကျောက် ကောင်းသောဝင်ခြင်းတွင်ရှိလတ္တံ့။ အချစ်ရေးမေတ္တာရေးကံကောင်းခြင်း၊မျက်နှာပွင့် စန်းပွင့်ခြင်း၊ငွေကြေးဥစ္စာပစ္စည်းများ စုဆောင်းတိုးပွားခြင်းတို့ကြုံရလတ္တံ့။ စိတ်ကူးဥာဏ်ပေါ်သလောက် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါ။အချိန်မဖြုန်းသင့်။ရည်ရွယ်ချက်ရှိသမျှ ရဲရဲလုပ်ပါ။ ဘာပဲလုပ်လုပ် အတိုက်အခံ အခက်အခဲ စိတ်ပူစရာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာများကြုံတွေ့ပြီးမှ အောင်မြင်လတ္တံ့။ မိမိမသိခဲ့သော အတိတ်ကံ အကောင်းအဆိုး နှစ်မျိုးစလုံး၏ အကျိုးကို တွေ့ကြုံခံစားရလတ္တံ့။ ငွေရေးကြေးရေး – […]